War kusoo kordhay dil & dhaawac Ciidamada Kenya u geysteen dad Shacaba ah - Awdinle Online
War kusoo kordhay dil & dhaawac Ciidamada Kenya u geysteen dad Shacaba ah
Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo ka mid ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa la sheegay in dad Shacab ah ay dil iyo dhaawac ugu geysteen deegaanka Yadoo, oo 25 km Waqooyi bari kaga beegan Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Dadkaan dilka iyo dhaawaca loo geystay ayaa goobjoogayaal sheegeen in qaarkood ay ciidamada Kenya kaxeysteen, isla markaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay la aadeen iyo sababta ka dambeeysa falkaasi.
Nabadoon Barre Qorane Ducaale ayaa sheegay in Ciidamada Kenya oo wata Saddex kamid ah gaadiidka dagaalka ay weerar ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen dad Dhalinyaro u badan oo ku yaalla degaanka Yadoo oo hoostaga Ceelwaaq, ayna rasaas ku fureen, taas oo sababtay geerida wiil uu dhalay iyo dhaawaca laba kale.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray nabadoonka in si awood ah ay Ciidamada Kenya u kaxeysteen saddex Dhalinyaro ah oo uu ku jiray mid uu Adder u yahay dhamaantoodna ay ahaayeen Xoolo dhaqato.
Nabdoonka ayaa wax laga weeydiiyay in dhalinyaradaas ay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab, hayeeshee uu sheegay in aysan jirin arrintaas, isla markaana degaanka Yadoo uusan ka jirin wax maamul ah.
Saraakiisha Ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa ka howlgalla degaannada Xaduudka weli kaam hadlin dadkaan lagu eedeyay inay dil iyo dhaawac ugu geysteen duleedka degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, hayeeshee waxaaa jirtay in dhowr jeer ay duqeyn ku dileen Ciidamada Kenya dad Shacab ah.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Axmed Madoobe & Guddoomiyaha Aqalka Sare?
Next articleMuxuu ku saabsanaa kulankii RW Rooble & Guddoonka Golaha Shacabka?